Sidee ayuu u dhaqan geli Go’aankii xukuumaddu ka qaadatay xiliga kala guurka G/ deegaanka? | Somaliland.Org
Sidee ayuu u dhaqan geli Go’aankii xukuumaddu ka qaadatay xiliga kala guurka G/ deegaanka?
August 31, 2012	Faallo…Cumar M.Faarax
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu dhawaan si feejigan oo taxadar leh u hoggo-tusaaleeyay Goleyaasha deegaanka dalka oo uu ku goodiyay inay wax ka qabtaan qabyooyinka badan ee horyaala xiligan oo ay shan sanadood muddo dhaaf ku sii fadhiyaan xafiisyadooda.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in Goleyaasha deegaanku ka baaqsadeen horu-socodkii loo baahnaa inay ka sameeyaan adeegyadda daruuriga ah ee ay u hayaan bulshada, waxa uu xusuusiyay inay ka soo dhalaalaan xaslashada fayo-dhawrka magaalooyinka, horumarinta bilicda iyo jidadka magaalooyinka dhexdooda.
Madaxweynuhu wuxuu si geesinimo ah farta ugu fiiqay Goleyaasha deegaanka cabashada dami wayday ee ka soo yeedhaysa bulshada ee maalin iyo habeenba soo gaadhaysa xafiiskiisa.
“Waxa hubaal ah oo dhegahayga ku soo batay cabashada dadweynaha ee goleyaasha deegaanka dalka aanay wax badan ka qaban horumarkii loo baahnaa ee dhinacyada jidadka magaalooyinka, bilicda iyo khashinka. Waxa hubaal in adeegyadii bulshadu ka sugaysay dawladaha hoose dayac badani ka muuqdo, inkasta oo ay dawladaha Hoose qaar ka mid ahi ay la yimaadeen dedaal, wax bandanna qabteen bulshaduna u markhaati tahay oo ay taariikhdu qori doonto midba meesha uu ka galo. Waxaan leeyahay cimrigiina ceeb ha ku sagootiyina oo dedaalla mudada idiin hadhay,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland oo 18-kii bishii August fariin u mariyay TV-ga qaranka Goleyaasha deegaanka maalin ka hor hambalyadii uu u dirayay shacbiga Ciidii Soon-fureed.
Waxa dadweynuhu ku diirsadeen tallaabo muddo la sugayay oo uu ka qaaday Goleyaasha deegaanka taasi oo ah inuu amray Wasiirka daakhiliga inuu soo saaro wareegto uu ku xadidayo isticmaalka maaliyadeed ee Goleyaasha deegaanka. Si aan xiliga kala guurka ah hantida qaranka loo gacan-togaaleyn.
“Waxaan leeyahay Goleyaasha deegaanka Doorashaduna ha idiin timaado idinka oo shaqeynaya. Anigoo tixgelinaya duruufaha iyo wakhtiga kala guurka ah, waxaan farayaa Wasiirka Daakhiliga inuu soo saaro qoraal uu ku xadidayo awoodaha isticmaalka maaliyadda. Si aanay u dhicin in qofna uu ku galo olale u khaas ah si aan loo jabin qorshaha horumarinta Maaliyadda ee sanadkan 2012-ka kaasi oo la doonayo in dawladaha hoose loo adeegsado horumar 50%,”ayuu yidhi Madaxweynuhu.
Wasiirka Arrimaha Gudaha waxa horyaala inuu indho-dheer u yeesho sidii uu u hubin lahaa isticaalka kharashaadka Dawlaha Hoose xiligan kala guurka ah, si aanay maayarrada xafiisyada fadhiyay toban sano ku dhawaad.
Si kastaba arrintu ha noqotee waxa Goleyaasha deegaanka dalka oo xukuma dawladaha Hoose ee magaalooyinka dalka la gudboon inay bilaha u hadhay ay dedaal u galaan inay wax ka qabtaan adeegyada bulshada, hadalka madaxweynahana ha u arkaan canaan ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa cabashooyinka bulshada.
Previous PostXarunta Maskax-maal oo shahaado sharaf gudoon siisay Wasiirka Madaxtooyada iyo sadex xubnood oo kaleNext PostMadaxweyne Siilaanyo oo magacaabay Wasiirka Cusub ee warfaafinta, Afhayeenka Madaxtooyadda	Blog